ဂြိုဟ်တုများ - ကောင်းကင်ဆိုင်ရာ Orbital နယ်ပယ်များ NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
မီဒီယာသုံးခုသည် DPP သို့ဆက်သွယ်သည်
#DontStoptheEducation: အွန်လိုင်းကွန်ဖရင့်နှင့်အဝေးမှသင်ယူခြင်းအပေါ် Virtual စားပွဲဝိုင်းကို Sennheiser ကကြေငြာခဲ့သည်။
ပင်မစာမျက်နှာ » အကြောင်းအရာ Delivery » ဂြိုဟ်တု: သူများသည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူ Orbital Spheres ပုံများ
ဂြိုဟ်တု: သူများသည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူ Orbital Spheres ပုံများ
1945 ဖြစ်ရပ်တစ်ခုတစ်နှစ်ဖြစ်ခြင်းများအတွက် မှနေ. ၎င်းတို့ကိုထောက်ခံပေးရမည်နိုင်သူကိုလက်ဝဲလည်းအများအပြားမဟုတ် - ကကမ္ဘာကြီးကိုအစဉ်အဆက်ဟုသိထားပြီးအရှိဆုံးအကြီးအကျယ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပဋိပက္ခ၏အဆုံးကိုမြင်သောအခါ, အရှည်ဆုံး-running အမေရိကန်သမ္မတ အစဉ် Franklin Delano Roosevelt ရုစဗဲ့ (ကျွန်ုပ်တို့၏ 32nd သမ္မတ) ထာသို့လွန်နှင့်သူ၏ဒုတိယသမ္မတ Harry S. Truman အားဖြင့်အောင်မြင်ခဲ့သဖြင့်, ကုလသမဂ္ဂနောက်ဆုံးတော့အဆိုပြုထားနှင့်ထူထောင်ကြောင်းထိုနှစ်အောက်တိုဘာလအားဖြင့်၎င်း, ခံခဲ့ရပါတယ်, အာသာ C. Clarke, တီထွင်သူ, ရူပဗေဒ, ရေအောက်စူးစမ်းရှာဖွေသူနှင့်သိပ္ပံဝတ္ထုစာရေးဆရာမှတ်ချက်ချ, မှန်ကန်စွာလူလုပ်ဂြိုဟ်တု၏ထွန်းနှင့်အဓိကအသုံးပြုမှုကိုခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။
မစ္စတာ Clarke ကသူ့ခေတ်ထိပ်သုံးသိပ္ပံ-ထူးအိမ်သင်စာရေးဆရာများထဲကတစ်ခုဖြစ်လာအပေါ် သွား. လည်းအောင်မြင်စွာ 1956 အတွက်ဆဲလ်ဖုန်းနှင့် GPS စနစ်၏ထွန်းခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။ သူကအေဒီ 2000 ၌သူ၏အရပ်ဘက်နှင့်သိပ္ပံနည်းကျအောင်မြင်မှုများနိုက်နှင့် 2008 အတွက်ကွယ်လွန်သွားခဲ့သည်။ သူကသူ့လုပ် ဂြိုဟ်တု အယ်ဒီတာတစ်ဦးစာတစ်စောင်အဖြစ်ဗြိတိသျှပိုင်သိပ္ပံမဂ္ဂဇင်းကြိုးမဲ့ကမ္ဘာ့ဖလားအတွက်ခန့်မှန်း။ သင်ဤ link ကိုအတူကကြည့်ယူနိုင်သည် lakdiva.org/clarke/1945ww/1945ww_feb_058.html.
သူသည်မဂ္ဂဇင်းမှစေလွှတ်တော်မူသောတဦးတည်းနှင့်အချို့သောကန့်သတ်စောင်ရေမြင်ဘူးသောတစ်စက္ကန့်ပိုပြီးအသေးစိတ်စာတစ်စောင်: Clarke ကတကယ်တော့အဲဒီနှစ်2အက္ခရာများဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ မူလကယင်း ဂြိုဟ်တု အယူအဆတစ်ခုအာကာသစခန်းမှပိုပြီးအကြံအစည်ဘွားမြင်လေ၏။ ဒါဟာတစ်ဦး onboard န်ထမ်းများရှိသည်ထင်ခဲ့သည်ကိုလည်းဒုံးကျည်အဖြစ်င်း၏ဆက်သွယ်ရေး application များအတွက်ဆီဖြည့မှတ်တိုင်အဖြစ်အစေခံလိမ့်မယ်။ သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ 50 နှစ်အတွင်းဂြိုဟ်တု၏ထွန်းဟောကိန်းထုတ်ပေမယ့်ထက်အများကြီးပိုမြန်ဖြစ်ပျက်; သို့သော်သူကအကြံပြုခဲ့သည်အဖြစ်အာကာသယာဉ်ကူညီ၎င်း၏အသုံးပြုရန်အဘယ်သူမျှမပြဋ္ဌာန်းချက်ရှိ၏။ (တစ်နေရာတည်းတွင်ဆက်နေနှင့်ကမ္ဘာရဲ့လည်ပတ်မှုအတိုင်းလိုက်နာကြောင်းသို့မဟုတ် orbs) ပထဝီစာရေးကိရိယာဂြိုဟ်တုများ၏ concept ကို Clarke မှမူရင်းမဟုတ်ခဲ့, သူ Konstantin Tsiolkovsky ၏လုပျငနျးအပေါ်တည်ဆောက်ခြင်းခဲ့သည်။
ရုရှား ဂြိုဟ်တု Sputnik နှောင်းပိုင်းတွင် 1957 အတွက်ကမ္ဘာပတ်လမ်းကြောင်းအောင်မြင်။ ရုံ4လကြာပြီးနောက်အစောပိုင်း 1958 အတွက်အမေရိကန်ကိုလည်းခဲ့ ဂြိုဟ်တု (ထို Explorer ကိုငါ) ကမ္ဘာပတ်လမ်းကြောင်း၌တည်၏။ 1959 ခုနှစ်တွင်အမေရိကန်ရေတပ်သည်ပထမဦးဆုံးရာသီဥတုကစတင် ဂြိုဟ်တု: အတော်လေးအဖြစ်ကောင်းစွာမျှော်လင့်အဖြစ်ထွက်အလုပ်လုပ်မပြုခဲ့ပေမယ့်သူ့ရဲ့ယခင်ကဲ့သို့တူညီသောရည်ရွယ်ချက်ရှိခဲ့ရာ TIROS2ကအနည်းငယ်တစ်နှစ်ကျော်ကျော်အကြာမှာ 1960 အတွက်နောက်တော်သို့လိုက်ခဲ့သည်ဟူသော Vanguard 1, ထိုနှစ်တွင်ပထမဦးဆုံးဆက်သွယ်ရေး ဂြိုဟ်တု, ထို: Echo, ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ အဆိုပါ: Echo တစ် passive ခဲ့သည် ဂြိုဟ်တု; ထိုသို့ချွတ်အချက်ပြမှုများ bounce ဖို့ပဲတစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့သည်။ ရှိတဲ့ Relay နှင့် Telstar: 1962 ပထမဦးဆုံးနှစ်ဦးကိုတက်ကြွစွာဆက်သွယ်ရေးဂြိုဟ်တု၏ပစ်လွှတ်ကိုမြင်တော်မူ၏။ 1964, ပထမဦးဆုံးပထဝီစာရေးကိရိယာအတွက် ဂြိုဟ်တုအဆိုပါ Syncom 3, ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ မကြာသေးမီနှစ်များတွင်ကမ္ဘာပတ်လမ်းကြောင်းအတွင်းဂြိုဟ်တု၏နံပါတ်တစ်ဝှမ်း 1000 သို့မဟုတ်ဒါမှာတခုလုံးကိုရစ်ဝဲသိရသည်။ ဒါပေမယ့်တစ်ခုသာအနည်းငယ်စစ်ရေးဂြိုဟ်တုကိုမြေကြီးအစွန်းရောက်အနီးကပ်တက်ဓါတ်ပုံတွေကိုအဘို့အခွင့်အာဏာရှိပါသည်။
အကြီးဆုံးအတု ဂြိုဟ်တု (ကျွန်တော်) cue သိသိသာသာဂီတ (သိသော) နိုင်ငံတကာအာကာသစခန်းဖြစ်ပါတယ်။ ဂြိုဟ်တု၏လက်ရှိ '' သီးနှံ '' အပါအဝင်မဟုတ် မကြာသေးမီကဖြန့်ချိ, ထစလှေတျတျောထားပြီးကြောင်းဂြိုဟ်တု၏နံပါတ်ခြောက်ဆယ်-ငါးရာကျော်ဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့၏ဂြိုဟ်တုကဲ့သို့သောအမျိုးအစားများနှင့်လုပ်ငန်းဆောင်တာအမျိုးမျိုးကိုဖြည့်ပါ: ထောက်လှမ်းရေး / ကင်းထောက် (စစ်ရေး / အစိုးရ), ဆက်သွယ်ရေးနှင့်ကမ္ဘာမြေတိုင်းထွာ (ထိုကဲ့သို့သောရာသီဥတုခန့်မှန်းခြင်းနှင့်မြေပုံချမှတ်ခြင်းများအတွက်အဖြစ်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး,), ဒါပေမယ့်အာကာသလေ့လာရေးအဘို့, ရှိ ဆန့်ကျင်အာကာသ-ဘွားပစ္စည်းကိရိယာများကိုဖျက်ဆီးသဖြင့်ရန်သူဒုံးခွင်းဒုံးများနှင့်တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးနေဖြင့်ကာကွယ်ရေးအတွက်အသုံးပြုထားတဲ့ Killer ဂွိုဟျတု (စစ်ရေး), (ဆိုလိုသည်မှာသည်အခြားဂြိုဟ်တု) ဒါခေါ်။ ဒါဝေးကိုသာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု, တရုတ်နှင့်ရုရှားကအာကာသအတွင်းပစ်မှတ်ဖကျြဆီးနိုငျပါပွီ။ Navigator ဂြိုဟ်တု GPS စနစ်အတွက်အသုံးပြုနေကြသည်။ Biosatellites သုတေသနအတွက် (ယေဘုယျအားဖြင့် Non-လူ့) အာကာသသို့အသကျရှငျပစ္စည်းသယ်ဆောင်ရန်လုပ်ကြသည်။
ဂြိုဟ်တုကသူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အပေါ် (သို့မဟုတ်ဥပဒ်များနှင့် Orbital ယိုယွင်းနေဖြင့်) ကိုအခြေခံပြီးရွေးကောက်တော်မူထားတဲ့အတိုင်းကောင်းစွာအသုံးပြုသောပတ်လမ်းအမျိုးမျိုးရှိသည်။ Orbital အများအပြားအစိတ်အပိုင်းများရှိသည် ဖြစ်. , ဤအနေသောခေါင်းစဉ်: မြင့်, ဗဟိုပြု, စားပြီး, ရှို, Pseudo, အထူးများနှင့်က Synchronous ။ အမြင့် orbited ခံရမျက်နှာပြင်ကနေဂြိုဟ်တုအကွာအဝေးဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာမြေပတ်လမ်း (4 မိုင်အထိ) အနိမ့်ရာမှလတ် thru (1240 အထိ) အထိ 22,236 ထွဋ်ရှိသည်, Geosynchronous (22,236 မိုင်အတိအကျအထိ), နှင့်မြင့်မားသောကမ္ဘာမြေ Orbit မှတက်သမျှသောလမ်း (22,236 မိုင်ထက်ကျော်လွန်ပေမယ့်နေဆဲညျမွကွေီးရဲ့ မြေထုဆွဲအားကိုလယ်) ။ မြင့်မားတဲ့မြေကြီးတပြင်ပတ်လမ်းအတွင်းလူလုပ်ဂြိုဟ်တုပုံမှန်အားဖြင့်သူတို့ရဲ့အသုံးဝင်မှု outlasted ရှိသည်ဟုနှင့်အခြားဂြိုဟ်တု၏လမ်းထဲကသူတို့ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ဒီအမြင့်မှာနေရာချကြသည်; ဂြိုဟ်တုပတ်လမ်း၏ဤအမျိုးအစားကိုမကြာခဏ (ရည်ညွှန်း၏လမ်းဖြင့်, လများသောအားဖြင့် 238,900 မိုင်မြေကြီးတပြင်အထက်ဖြစ်ပါတယ်) တစ်ခါသုံးသို့မဟုတ် Junk သို့မဟုတ်သင်္ချိုင်းပတ်လမ်းဟုခေါ်သည်။ အခါ ဂြိုဟ်တု geosynchronous ပတ်လမ်းအတွင်း၎င်း၏ Orbital မြန်နှုန်းတစ်စက္ကန့် 9800 ခွကေိုန်းကျင်သည် ဖြစ်. , ဒီအမြင့်မှာကအရာဝတ္ထုကြာ 1 sidereal နေ့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂြိုလ်လှည့်ပတ်ရန် (ပျမ်းမျှ sidereal နေ့ကလျော့နည်း4နာရီထက်ရုံ 24 မိနစ်အောက်) ကမ္ဘာမြေရဲ့အလှည့်မြန်နှုန်းနှင့်အတူကိုက်ညီသော။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂြိုလ်တုအသုံးပြုဗဟိုပြုပတ်လမ်း, ဒါကြောင့်ယခုအချိန်အထိနေသောခေါင်းစဉ်: Geocentric (မြေကြီးတပြင်ပတ်ပတ်လည်), (နေန်းကျင်) Heliocentric, နှင့် (အင်္ဂါဂြိုဟ်ပတ်ပတ်လည်) Areocentric ။ မတူမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အဆိုပါဖြစ်စေမဖြစ်ပါသည် ဂြိုဟ်တု'' s ကိုကမ္ဘာပတ်လမ်းကြောင်းမြို့ပတ်ရထားသို့မဟုတ်ဘဲဥပုံဖြစ်ပါတယ်။ geosynchronous လွှဲပြောင်းပတ်လမ်း, geostationary လွှဲပြောင်းပတ်လမ်း, molniya ပတ်လမ်းနှင့် tundra ကမ္ဘာပတ်လမ်းကြောင်း:4စံဘဲဥပုံမြေကြီးတပြင်ပတ်လမ်းရှိပါတယ်။ တစ်ဦးက tundra ကမ္ဘာပတ်လမ်းကြောင်း 63 တစ်ဦးအကွံရှိသညျ။4°နှင့်တစ်ဦး sidereal နေ့ရက်ကာလ၌ကမ္ဘာဂြိုဟ် orbits; မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ကြောင့်၎င်း၏အမြင့်က၎င်း၏ဘဲဥပုံ၏ပုံစံနှင့်အညီကွဲပြားနှင့်အတူကမ္ဘာဂြိုဟ်ကိုကျော်တဦးတည်းပုံသေဧရိယာ (သို့သော်မပေးတိတိကျကျတစ်ဦး Geostationary ပတ်လမ်းအတိုင်း), အတွက်ရှိနေမည်။ ဂြိုဟ်တုပတ်လမ်း၏အကွံပုဖြစ်ပါသည် ဂြိုဟ်တု'' s ကိုစင်ကြယ်သောအီကွေတာပတ်လမ်းကနေကှဲလှဲ - အရှင်တစ်ဦးဝင်ရိုးစွန်းပတ်လမ်းကအရမ်းနီးပါး 90 °ဖြစ်ပါတယ်။ Pseudo ပတ်လမ်းအများအပြားရှုပ်ထွေး Orbital ပုံစံများကိုဖုံးလွှမ်း; ရိုးရှင်းစွာကကောငျးကငျခန္ဓာကိုယ် Rotate orbited ခံရသောဦးတည်ချက်ဆန့်ကျင်လှည့်ဆိုလိုတာက retrograde ပတ်လမ်းသည်အရာ၏အရိုးရှင်းဆုံးဥပမာတစျခု; ဒါဟာရေရှည်တည်တံ့တည်ငြိမ်ပတ်လမ်းတည်ထောင်ရန်ပိုပြီးလောင်စာကြာသောကွောငျ့ retrograde ပတ်လမ်းမရှိသလောက်ကိုအသုံးပြုသည်။ အထူးပတ်လမ်း Sun က-synchronous ပတ်လမ်းနှင့်မွန်းပတ်လမ်းဖြစ်ကြောင်း, မွန်းပတ်လမ်းကတူသောအသံအဘယ်အရာကိုတော်တော်များများဖြစ်ပါတယ်။ နေရောင်-synchronous ပတ်လမ်းကိုလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောမျောက်ဖြစ်၏ ဂြိုဟ်တုပတ်လမ်း၏ဤပုံစံသည်အတွက် ဂြိုဟ်တု တူညီသောနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးအချိန်နေ့ရက်တိုင်းမှာအတူတူပင်တည်နေရာကျော်ဖြတ်သန်း; ဆန္ဒရှိလျှင်, ကမ္ဘာပတ်လမ်းကြောင်းကအစဉ်အမြဲရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းများအလွန်အမင်းအထောက်အကူသောနေရောင်ခြည်ထဲတွင်ဖြစ်ပေါ်နှင့်ရင်ဆိုင်မဆိုမှောင်မိုက်အရိပ်နီးပါးတူညီတည်နေရာအတွက်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဖြစ်ကြောင်းထိုကဲ့သို့သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။
အစောပိုင်းကရှင်းပြသည်အဖြစ်တစ်ဦး synchronous ပတ်လမ်းအတွင်းဂြိုဟ်တုသူတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလှည့်သောဦးတည်ချက်အတွက်လှည့်ပတ်သည့်ကောငျးကငျခန္ဓာကိုယ်တစ်ဝှမ်းတဦးတည်းတော်လှန်ရေးလုပ် အချိန်ပမာဏအတူတူကြောင့်တစ်ချိန်ကလှည့်မှခန္ဓာကိုယ်ကြာ; synchronous ပတ်လမ်းအပေါငျးတို့သကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးပေါင်းဒီမူကွဲသို့မဟုတ်ပွုပွငျပွောငျးလဲဖြစ်ကြသည်။ အခါ ဂြိုဟ်တု သို့မဟုတ်ကောငျးကငျခန္ဓာကိုယ်0°ထက်အခြားတစ်ဦးအကွံနှင့်အတူပိုကြီးတဲ့ကောငျးကငျခန္ဓာကိုယ် orbits နှင့်ပုံသေတည်နေရာ (ယေဘုယျအားဖြင့်မြေကြီးသားမျက်နှာပြင်ဖြစ်ဖို့ယူဆ), ကြောင့်လှုပ်ရှားမှုကြီးရဲ့ပုံစံကနေရှုမြင် ဂြိုဟ်တုပုံမှန်ကြားကာလမှာကြည့်ရှုအားပေးလျှင်, ကောင်းကင်ပြာထဲမှာအတိုင်ပုံ 8 ပုံစံအချို့မူကွဲခြေရာကောက်ရန်ပုံပေါ်; ဒီပုံစံတစ်ခု analemma ဟုခေါ်သည်။ ဂြိုဟ်တုပတ်လမ်းနှင့်လည်ပတ်စဉ်ဆက်မပြတ်နဲ့ synchronous ရောက်နေတယ်ဆိုရင်, ဒီလိုက်တယ်ကိန်းဂဏန်း 8 ပုံစံ၏အတိအကျကိုပုံမပြောင်းပါလိမ့်မယ်။ အချက်တစ်ခုအမျိုးမျိုးထိုကဲ့သို့သော '' mutated '' ကိန်းဂဏန်းရှစ်ပုံစံ၏ပုံစံရဲ့အတိအကျ permutation ဆုံးဖြတ်ရန်။ တစ်ဦးက ဂြိုဟ်တု ဂြိုဟ်တုပတ်လမ်း - နှင့်အတူယိမ်းယိုင်°တစ်0မှာမြို့ပတ်ရထား Orbital ပုံစံတစ် Geostationary (ရေးသားသူပြီးနောက်ခေါ် "Clarke") ရှိသည်ဟုဆိုသည်။ ဒါဟာဂြိုလ်အထက်တွင် 22,236 မိုင်အမြင့်မှာအားလုံးအချိန်များတွင်မြေကြီးသို့ဆွေမျိုးအတိအကျနေရာတစ်ခုတည်း၌တည်နေပုံပေါ်သည်။ ဒါဟာ ပေါ်လာ စာရေးကိရိယာ; ကမွကွေီးပျေါနေရာမှဆွေမျိုးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့စက္ကန့်လျှင် 9800 ခြေရင်းနားမှာမိုဃ်းကောင်းကင် thru whizzing, တကယ်တော့ဖြစ်ပါသည်။
ဂြိုဟ်တု၏ပထမလှိုင်းပြီးနောက်ကျွန်တော်တစ်ဦးပိုင်ဆိုင်တဲ့ရှည်လျားသောကာလသည် fancier ဆက်သွယ်ရေး Array ကိုပိုပြီးအာရုံခံကိရိယာများ, ပိုပိုပြီးခေါင်းလောင်းနှင့်စီများမှုတ်အပေါ်ဖြည့်စွက်, ပိုမိုရှုပ်ထွေးပြီးစျေးကြီးတဲ့ဂြိုလ်တုတည်ဆောက်ရန်စသည်တို့စတင် ဂြိုဟ်တု အချို့သောအစိုးရများနှင့်ကုန်ကျစရိတ်ကြောင့်ကြီးမားသောကော်ပိုရေးရှင်း၏အလွန်သေးငယ်တဲ့အရေအတွက်ကများနှင့်တစ်ဦးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့လိုအပ်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုအတွက်သာဖြစ်နိုင်ပါခဲ့ ဂြိုဟ်တု ကမ္ဘာပတ်လမ်းကြောင်းထဲမှာ။ ဒီပုံစံနှောင်းပိုင်းတွင်တစ်ဦးအစွန်းရောက်အလှည့်ကိုယူတော်မူပြီ အသစ်တစ်ခုကိုလမ်းကြောင်းသစ်ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ ဂြိုဟ်တုအတွက်ကြီးမားတဲ့အရာသည်ယခုအခါငယ်များနှင့်စျေးနှုန်းချိုသာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါခေါ် Nano-ဂြိုဟ်တုမိုဃ်းတိမ် hit ပြီ သည် "1- ဒုံးပျံ / 1-ဂြိုဟ်တု"ပါရာဒိုင်းမရှိတော့မကြူးကျြောဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကြီးမားတဲ့ဖန်စီဂြိုဟ်တုနေဆဲလိုအပ်သောများမှာ - ငါ့ကိုမှားယွင်းတဲ့မရကြဘူး, ဒါပေမယ့်၏ဤနောက်တစ်နေ့လှိုင်း ဂြိုဟ်တု နည်းပညာအသစ်ကဖြစ်နိုင်ခြေပေးထားပါတယ်။ အခုတော့တစ်ခုတည်းပစ်လွှတ်သုံးဆယ်ဂြိုဟ်တုများ၏အထက်သို့င်နိုင်ပါသည်။ ကြောင့်နည်းပညာဆိုင်ရာတိုးဖို့ဤအသေးစားဂြိုဟ်တုအများအပြား, သေးငယ်စျေးသက်သက်သာသာဖြစ်ခြင်းနှင့်အများကြီးကွန်ပျူတာ မှလွဲ. သည် Sputnik ခဲ့တူညီသောစွမ်းရည်ရှိနိုင်ပါသည် အလွန် မြန်မြန်။ ကြောင့်ကုန်ကျစရိတ်နှင့် Orbital လိုအပ်ချက်များကိုငှါ, ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်သာအချို့ကို select လုပ်ပါအစက်အပြောက်တစ်ဦးတို့ကလေ့လာတွေ့ရှိ / သြဇာလွှမ်းမိုးမှုနိုင် ဂြိုဟ်တု ပုံမှန်ပေါ်မှာ။ ယခုဤပြောင်းလဲပစ်ရန်စတင်လျက်ရှိ၏ အလွန်သေးငယ်သောနှင့်စျေးပေါဂြိုဟ်တု၏ထွန်းဆက်သွယ်ရေး, အသံလွှင့်ခြင်းနှင့်သုတေသနအသစ်ရွေးချယ်မှုတစ်မူးဝြေခင်းခင်းကျင်းဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်။
အာသာ C. Clarke Explorer ကိုငါ ပထဝီစာရေးကိရိယာဂြိုဟ်တု relay ဂြိုဟ်တုခန့်မှန်း Syncom3Telstar TIROS 1 Vanguard2ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2019-01-04
ယခင်: စတီဖင်အာနိုးဂီတက CNN, Sony က Interactive မှ, PBS ပြီးတော့ CGTN ရန် Sonic တံဆိပ်တပ်ဘဝမှကယျတငျ
နောက်တစ်ခု: ကွန်ပျူတာ Vision ၏အင်ဂျင်နီယာချုပ်, 3D ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး